Phupha nge-Skylight Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Isibane esibhakabhakeni sisetyenziselwa ukukhanyisa kunye nokufaka umoya ophahleni. Ukuba indawo yophahla ikwandisiwe ngenjongo yokuphila, iwindow enophahla ikwabonelela ngombono wendawo esingqongileyo. Kuxhomekeke kubude bendlu ekuyo ifestile yophahla, kunokwenzeka ukuba ujonge umgama ngaphezulu kwezindlu ezincinci.
Kwakhona emaphupheni ethu sinokufumana ukukhanya kwezulu njengokuphupha. Nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela uphawu ekufuneka luthathelwe ingqalelo, kodwa kunye nezenzo ezenziwayo kunye nayo. Umzekelo, uyivulile okanye uyivalile ephupheni? Ngaba yayihlambulukile kwaye uyayibona okanye yayingcolile?
1 Uphawu lwephupha «uphahla lwefestile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uphahla lwefestile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukukhanya kwelanga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uphahla lwefestile» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "ifestile yophahla" ifuzisela uhlalutyo jikelele lwephupha. Isimo sengqondo ukusuka ephupheni ukuya ebomini bakhe nakwabanye abantu. Ngapha koko, inokubonisa nolindelo umntu analo kwingqondo yabanye abantu el mundo ukuvuka. Nangona kunjalo, xa kuvavanywa abanye abantu, umntu oleleyo akufuneki asebenzise ingqondo yakhe njengesikhokelo kuphela, kodwa athembele kwiimvakalelo zakhe.
Nabani na ojonga ukukhanya kwesibhakabhaka ephupheni lakhe unamathemba akude ebomini bokuvuka. Ukukhanya kwesibhakabhaka esivaliweyo ephupheni kuzisa umntu ophuphayo. Imiqobo nokumelana naye. Kodwa uya kuba nakho ukuyazi kakuhle le nto ngokusebenzisa ukuqonda kwakho kunye nengqiqo yakho. Ukuba isibhakabhaka esikhanyayo sivulekile ephupheni, abo bachaphazelekayo banokulindela iiyure ezonwabileyo nezonelisekileyo kubomi bokwenyani. Nangona kunjalo, eli phupha linokubhekisa kwizilingo ekufuneka zichaswe ngesenzo esinengqiqo.
Ukuba uphuma esibhakabhakeni uye eluphahleni ephupheni, kuya kufuneka uzilungiselele ukuphazamiseka kunye neengxabano. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha banokukhokelela kwigama eliphezulu. Ukucoca isibane esibhakabhakeni ephupheni kuhlala kubonisa ukuba ungayisebenzisa ingqondo yakho ukwenza umsebenzi onzima. inkinga Ndifuna ukusombulula. Nangona kunjalo, xa usombulula le ngxaki, kunokuba luncedo ukubandakanya intuition yakho. Kuba oku kuvumela umbono opheleleyo wemeko.
Uphawu lwephupha «uphahla lwefestile» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, ukukhanya kwesibhakabhaka kubandakanya umfanekiso wamaphupha wokuqonda ukuba angazabalazela into ephezulu, kodwa angafuni ukushiya imeko yakhe ekhuselekileyo kwihlabathi elivukayo. Ngale ngaphakathi Ungquzulwano Kuya kufuneka ujonge ngakumbi ukufumana isisombululo esifanelekileyo.
Ukuba umntu oleleyo ujonge kude kumgama ophuma esibhakabhakeni ovulekileyo ephupheni lakhe, ulangazelela okuhle Iimbono zexesha elizayo. Kuxhomekeke kwinto ebonwayo ephupheni, izigqibo zinokubonwa koku ngekamva. Ukuba kwelinye icala ujonga isibhakabhaka esivaliweyo, ufuna ukufumana umbono wemeko ethile ebomini bokuvuka. Nangona kunjalo, umntu akafanelekanga ukuba enze umdla woluntu kuyo.
Uphawu lwephupha «ukukhanya kwelanga» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, umntu ophuphayo kufuneka azi ngefestile "yophahla" ukuba unento ethile ebomini bakhe. ukhuseleko ufuna ukuzifihla.